လူတွေရဲ့ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းကြောင့် ကိုယ့်ကို ခွေးတစ်ကောင်လိုတွေးထင်နေခဲ့တဲ့ မြေခွေးလေး - Mckzone Daily
လူတွေရဲ့ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းကြောင့် ကိုယ့်ကို ခွေးတစ်ကောင်လိုတွေးထင်နေခဲ့တဲ့ မြေခွေးလေး
Emma D’Sylva အမည်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးက ရွှေနှလုံးသားတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးလို့ ကျွန်တော်အခိုင်အမာကို ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ။ သူမဟာ အရင်သခင်က ဂရုမစိုက်နိုင်တော့တဲ့ လေးလသား မြေခွေးငယ်လေးကို ကယ်တင်ခဲ့တာပါ။ မြေးခွေးလေးကို Todd လို့ နာမည်မဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနာမည်ကို သူမဘယ်ကနေရလာတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ ခန့်မှန်းနိုင်ပါသလား? ၁၉၈၁ ခုနှစ်က Disney ရဲ့ The Fox and The Hound ရုပ်ရှင်ကနေ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ခန့်မှန်းမိပါတယ်။ အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာဆို Todd ဆိုတဲ့အမည်က ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စူပါမြေခွေးရဲ့ နာမည်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့အိမ်မှာ မြေခွေးဘဲမဟုတ်ဘူး အခြား အမွေးထူးတဲ့ ခွေးလေးတွေလည်း ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ထားသေးတာပါ။ သူမက တိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို ချစ်တက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတာ သိသိသာသာပေါ်လွင်နေပါတယ်။ Ms.D’Sylva ရဲ့အိမ်မှာဆိုရင် နံကောင်၊ ရက်ကွန်းဝံ၊ ပုတ်သင် နဲ့ မြွေတွေ စတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုလည်း မွေးမြူစောင့်ရှောက်ထားပါတယ်။ Ms.D’Sylva နဲ့သူမရဲ့မြေခွေးလေးနဲ့အတူ ပျော်မွေ့နေတဲ့ ပုံတွေကိုလည်း စာဖတ်သူတွေတွက် ဝေမျှပေးထားပါတယ်။
US မှာ မြေခွေးတွေကို စောင့်‌ရှောက်ဖို့ တရား‌ဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ အကြောင်းကို ကြားတာနဲ့ အစတော့ ကျွန်တော်အံ့သြခဲ့ပါတယ်။ Kay Fedewa ရဲ့ သဘောတူညီချက်အရ US မှာ မြေခွေးတွေကို အိမ်တွင်းတိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးအပိုင်းမှာလည်း အရေးပါကြောင်း ထောက်ခံထားပါတယ်။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်က စပြီးတော့ US မှာ မြေးခွေတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ထားကြလေ့ရှိပါတယ် ။
Emma D’Sylva အမညျရှိတဲ့ အမြိုးသမီးက ရှနှေလုံးသားတဈခုကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့အမြိုးသမီးလို့ ကြှနျတျောအခိုငျအမာကို ယုံကွညျပါတယျဗြာ။ သူမဟာ အရငျသခငျက ဂရုမစိုကျနိုငျတော့တဲ့ လေးလသား မွခှေေးငယျလေးကို ကယျတငျခဲ့တာပါ။ မွေးခှေးလေးကို Todd လို့ နာမညျမဲ့ပေးခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီနာမညျကို သူမဘယျကနရေလာတယျဆိုတာ ခငျဗြားတို့ ခနျ့မှနျးနိုငျပါသလား? ၁၉၈၁ ခုနှဈက Disney ရဲ့ The Fox and The Hound ရုပျရှငျကနေ ဖွဈလိမျ့မယျလို့ ကြှနျတျောခနျ့မှနျးမိပါတယျ။
သူမရဲ့အိမျမှာ မွခှေေးဘဲမဟုတျဘူး အခွား အမှေးထူးတဲ့ ခှေးလေးတှလေညျး ကြှေးမှေးပွုစုစောငျ့ရှောကျထားသေးတာပါ။ သူမက တိရိစ်ဆာနျလေးတှကေို ခဈြတကျတဲ့သူတဈယောကျဆိုတာ သိသိသာသာပျေါလှငျနပေါတယျ။ Ms.D’Sylva ရဲ့အိမျမှာဆိုရငျ နံကောငျ၊ ရကျကှနျးဝံ၊ ပုတျသငျ နဲ့ မွှတှေေ စတဲ့တိရစ်ဆာနျတှကေိုလညျး မှေးမွူစောငျ့ရှောကျထားပါတယျ။
US မှာ မွခှေေးတှကေို စောငျ့‌ရှောကျဖို့ တရား‌ဝငျခှငျ့ပွုထားတဲ့ အကွောငျးကို ကွားတာနဲ့ အစတော့ ကြှနျတျောအံ့သွခဲ့ပါတယျ။ Kay Fedewa ရဲ့ သဘောတူညီခကျြအရ US မှာ မွခှေေးတှကေို အိမျတှငျးတိရိစ်ဆာနျမှေးမွူရေးအပိုငျးမှာလညျး အရေးပါကွောငျး ထောကျခံထားပါတယျ။ ၁၉၅၉ ခုနှဈက စပွီးတော့ US မှာ မွေးခှတေိရိစ်ဆာနျလေးတှကေို ကြှေးမှေးပွုစုစောငျ့ရှောကျထားကွလရှေိ့ပါတယျ ။
စိတ်ဓာတ်ကျ ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဓာတ်ဆီနှင့်လောင်ပြီး မီးရှို့ သတ်သေခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး
အဘွားက အလိုလိုက်ပြီး နေ့တိုင်းလိုလို စမတ်ဖုန်းပေးကိုင်တော့ မျက်စိကွယ်မလိုဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အသက် ၄နှစ်အရွယ် ကောင်လေး
ဓာတ်ပုံထဲမှာ ပြောင်စပ်စပ်ရုပ်လေးတွေနဲ့ အမြဲ ပါလာတတ်တဲ့ကြောင်လေးတွေ
Mask မတပ်ရင် ဝန်ဆောင်မှုမပေးနိုင်ဘူးလို့အငြင်းခံရပြီးနောက် သူမရဲ့ဘောင်းဘီတိုကို ချွတ်ပြီး ခေါင်းမှာ စွပ်ထားခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး